Mpanamboatra fitaovana - Orinasa sy mpamatsy fitaovana China
✭ Ity ampahany plastika ity no ampahany lehibe amin'ny masinina kafe kapsily, ary io no ampahany lehibe amin'ny masinina kafe kapsily.
✭Ny fitaovana ampiasaina amin'ity ampahany plastika ity dia PA66 + 45GF, ary misy faritra plastika telo lehibe izay mila atambatra amin'ity ampahany plastika ity. Ny ampahany mihetsiketsika ao amin'ny masinina sy ny famongorana ny kapsily dia tsy azo sarahina amin'io ampahany plastika io.
✭ Ny tombony dia tsy mora simba, milamina tsara, avo lenta, hahazoana antoka fa milamina ny masinina kafe mandritra ny asa ary mampihena ny tabataba.
✭Ity bobongolo ity dia ny famokarana orinasan'ny orinasanay, izay manome tolotra faritra plastika indrindra ho an'ireo mpanamboatra milina kafe. Ny fahaizan'ny famokarana andiana lasitra dia 800 isan'andro.